Novonoin'i Montenegro ny zotram-pireneny hanombohana vaovao
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Novonoin'i Montenegro ny zotram-pireneny hanombohana vaovao
Nanambara ny minisitry ny famatsiam-bola any Montenegro ao amin'ny Governemanta vaovao voafidy omaly, ny alin'ny Noely, fa tsy hanome fanampiana avy amin'ny fanjakana intsony ny kaompaniam-pirenena Montenegro Airlines.
Ny fanapaha-kevitra dia mitovy amin'ny didim-pitsarana momba ny fahafatesan'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, satria io ihany no hany vintana hivelomana dia ny lalàna 2019 momba ny fampiasam-bola amin'ny fanamafisana sy ny fampandrosoana ny orinasa ho an'ny fitaterana an'habakabakan'ny mpandeha sy ny entambarotra "Montenegro Airlines"
Araka ny tatitra iray tao amin'ny haino aman-jery BDK monina any Serbia, ny 3 septambra 2020, dia namoaka fanapahan-kevitra ny masoivoho misahana ny fiarovana ny fifaninanana mba hanokafana ny fomba famotopotorana ara-dalàna amin'ny fifanarahan'ny lalàna mifehy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana nomen'ny Lex MA.
Nandritra ny fizotran-kevitra izay nitarika an'io fanapahan-kevitra io dia nanandrana nanaporofo ny governemanta fa ny fepetra napetraka napetraky ny Lex MA, amin'ny totalin'ny vola 155,1 tapitrisa EUR, dia mifanaraka amin'ny fitsipiky ny mpampiasa vola amin'ny tsena, ka tsy fanampiana avy amin'ny fanjakana. Ny governemanta dia nanolotra fanadihadiana ara-toekarena nomanin'i Deloitte izay nanolotra fa ny Lex MA dia nandalo ny fitsapana MEO. Nahita lesoka maromaro ny masoivoho tamin'ny famakafakana ary tsy nanaiky ny fehin-kevitra fa ny fanampiana ara-panjakana notarihin'i Lex MA dia mifanaraka amin'ny MEOP. Nangataka tamin'ny governemanta izy mba hanao fangatahana ofisialy hahazoana fankatoavana fanampiana amin'ny fanjakana. Mbola miandry ny fanapaha-kevitra momba ny fampifanarahana ny Lex MA amin'ny fitsipiky ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Ny masoivoho koa dia nandidy ny governemanta hanala ny fanomezana fanampiana amin'ny alàlan'ny Lex MA. Amin'izay fotoana izay dia 43 tapitrisa EUR tamin'ny totalin'ny 155.1 tapitrisa EUR no nafindra tao amin'ny kaompaniam-pitaterana an-tseranana. Nandritra izany fotoana izany, niditra an-tsehatra ihany koa ny Vaomiera Eoropeana taorian'ny nahazoana fitarainana tamin'ny 4 Desambra 2020 avy amin'i Ryan Air, izay nanambara fa nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana mihoatra ny 43 tapitrisa EUR ny Montenegro Airlines tamin'ity taona ity.
Inona no miandry?
Raha nosokafana tamin'ny 3 Desambra 2019 ny fanadihadiana ofisialy momba ny fampifanarahana ny Lex MA miaraka amin'ny lalàna momba ny fanampiana avy amin'ny fanjakana, dia tsy maintsy mamarana ireo raharaha ireo ny masoivoho. Sarotra amin'izao fotoana izao ny mahita vokatra hafa amin'ireo fizotran-javatra ireo fa ny fahitana fa tsy mifanaraka amin'ny fanjakana i Lex MA. Midika izany fa ny masoivoho dia tsy maintsy manafatra ny Minisiteran'ny Fampiasam-bola, izay manana fitaterana ao anaty portfolio-ny, hamerina ny habetsaky ny fanampiana izay efa nafindra tany amin'ny Montenegro Airlines. Ny fe-potoana farany fanarahana ny kaomandy fanarenana dia efa-bolana. Ny minisiteran'ny fampiasam-bola dia manana adidy hanomana, ao anatin'ny roa volana aorian'ny fanapaha-kevitry ny masoivoho, ny kaomandy fanarenana azy manokana manoloana ny Montenegro Airlines, miaraka amina drafitra fanarenana sy fandaharam-potoana iray. Ny didin'ny minisiteran'ny fanarenana dia lohateny azo ampiharina. Raha manomboka amin'ny Montenegro Airlines ny fizotry ny tsy fandriam-pahalemana dia ny mpampindram-bola amin'ny fanjakana. Raha tsy mamoaka ny kaomisiona fanarenana an'i Montenegro Airlines ny Minisitera ao anatin'ny roa volana aorian'ny famerenan'ny maso ivoho ny maso, dia mety hitory izany ny masoivoho amin'ny raharaham-pitsarana amin'ny kaonty eo amin'ny fitsarana.
Raha tsy misy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana dia mety tsy ho afaka hiasa ela kokoa ny orinasa. Ny vinavina dia ny fiorenan'ny fiaramanidina afaka herinandro maromaro. * Araka ny lalàna, ny petra-bola momba ny tsy fahazoan-dàlana manohitra ny Montenegro Airlines dia azon'ny mpampindram-bola Montenegro Airlines atao, ary koa ny orinasa mihitsy.
Nanambara ny Governemanta fa hanangana kaompaniam-pirenena vaovao izy amin'ny volana ho avy, miaraka amin'ny fampiasam-bola manodidina ny 30 tapitrisa EUR. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia antenaina fa hiasa amin'ny fahavaratra 2022. Ny fananganana ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka vaovao dia tsy handany fotoana fotsiny, fa ho voasakan'ny fahatapahana koa fa ho very ny slot izay itanan'ny Montenegro Airlines ankehitriny, ary ny kaompaniam-pitaterana vaovao mamarana fifanarahana iraisam-pirenena vaovao ary mahazo fahazoan-dàlana ilaina. Mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny vanim-potoana fahavaratra 2021 ao Montenegro, satria ny manidina Montenegro Airlines dia maherin'ny 50% ny mpizahatany. Ny sehatry ny fizahantany any Montenegro dia efa nahazo fidiram-bola 90% teo anelanelan'ny volana janoary sy septambra 2020 noho ny fameperana COVID-19. Antenaina fa hiditra ny tsena ary ny mpitatitra tsy miankina dia handray an-tanana ny sasany amin'ireo zotra mahasoa. Ho hita eo raha ho tompon'andraikitra tokana amin'ilay orinasa vaovao ny Governemanta na hitady mpiara-miombon'antoka aminy.
Star Air manidina tsy miato mankany Surat avy any Belagavi sy Ajmer
Ny fifandraisana Bhutan - Israel vaovao
15 ora lasa izay
Olom-pirenena Rosiana 3.1 tapitrisa norarana tsy handao an'i Russia noho ny trosa tsy voaloa